ရန်ကုန်မြိူ့၇ဲ့ ..အလှအပ များ ပျက်စီး နေကြောင်း … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်မြိူ့၇ဲ့ ..အလှအပ များ ပျက်စီး နေကြောင်း …
ရန်ကုန်မြိူ့၇ဲ့ ..အလှအပ များ ပျက်စီး နေကြောင်း …
Posted by fatty on May 21, 2011 in Copy/Paste | 29 comments
အခုအစိုးရတက်လာတော့ ရန်ကုန်မှာ ကန်ထရိုက်တာတွေရဲ့ ဆောက်ချင်တိုင်းဆောက်ထားတဲ့
တိုက်တာ အဆောက်အဦတွေ ဘာ plan မှမရှိဘဲ နေရာလွတ်တာနဲ့ဆောက် ။ ရေစီးရေလာ
မကောင်း …။ အမှိုက်ပုံတွေ ဘယ်နားထားရမှန်းမသိ ..။ အဲဒီအချက်အလက်တွေထည့်သွင်း
စဉ်းစားလာပါပြီ ..။ ဥပမာ လှည်းတန်း အ၀ိုင်းကြီးဟာ အဓိက နေရာကြီးပါ …
အဲဒီအ၀ိုင်းကြီးမှာ ဂုံးကျော် တံတားကြီးတွေ မဖြစ်မနေလာရမှာပါ ..။ လမ်းတွေလဲမဖြစ်မနေ
ချဲ့ရတော့မှာပါ ..။ လမ်းဘေးမှာကပ်ဆောက်နေတဲ့ ကွန်ဒိုကြီးဟာ လမ်းပေါ်မေးတင်နေလို့
သင့်တော်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားကြဖို့ကောင်းပါပြီ ..။
ကိုဖတ်ကလဲ အစလေးတွေဆွဲဆွဲထုတ်သွားပြီး အမြဲ တန်းလန်းထားတာပဲ။
ဟို အဆောက်အဦကြီးလေ။ အ၀ိုင်းလေးဘေးက အ၀ိုင်းကြီး။ ကျုပ်ပြန်ရောက်တာ ၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။
အခုထိ တန်းလန်းကြီး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က မြင်ကွင်းတွေကို နှမျောမိတယ် အဲဒီ အဆောက်အဦး
ကြီး ဆောက်လိုက်တဲ့ ရှမ်းတောင်တန်း ၊ ၀င်းဆံသ ၊ ချန်ဆယ်လာ နဲ့ဂိုးရှိုး စတိုးနား အထိ ပလက်ဖောင်းဟာ
မြန်မာပြည်မှာ ကျုပ် မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးမား အကျယ်ပြန့် ဆုံး လူသွား ပလက်ဖောင်းကြီးပေါ့။
ခုတော့ဗျာ။ လူသွားစရာတောင်နေရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ၉၉ ကနေ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းတဲ့ လှည်းတန်း မီးပွိုင့်
မှာ ပိတ်နေတဲ့ အခါ ဘေးက Free way မှာတောင် ဘယ်ကားမှ သွားလို့မရပါဘူး။ ဖရီးဝေးကို သွားချင်ရင်
လူသွား ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ တက်မောင်းမှ ရတော့ တစီးပြီး တစ်စီး တက်လိုက်တာ ပလက်ဖောင်းက
ကြေမွကွဲအက်နေလိုက်တာ လူအပေါင်းဟာ အဲဒီနားလေးက ဖြတ်လျှောက်ရင် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတဲ့
ပလက်ဖောင်းဟာ အဲဒါမှ အစစ်ပါပဲ။ လူတွေ ဟာ လမ်းမပေါ်ကို တက်လျှောက်တယ်နော်။ တချို့ တွေ မှတ်ချက်
ချပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူတွေ စည်းကမ်းမရှိဘူးတဲ့။ ဒါဟာ အပြည့်အ၀ မမှန်ပါဘူး။ လူတွေကို အမှိုက်
ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မပစ်စေချင်ရင် နေရာတကာမှာ အမှိုက်ပုံးတွေ ထားပေးနိူင်တဲ့ အချိန်အထိပေါ့။
အဲလို ထားပေးနိုင်တဲ့ အချိန် အထိမှ လူတွေက စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်ကျတယ် ဆိုရင်တော့ တော်တော် ပျက်စီးနေ
ပြီ ပြောရမယ်။ ဆိုတော့ လူတွေက လမ်းမပေါ် အထိ ဘာကြောင့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လျှောက်နေကြလဲ။
လူသွားစရာ ပလက်ဖောင်း မရှိဘူးလေ။ သိန်းထောင်ကျော် ကားကြီးစီးနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ 
အတူသွားတော့ လမ်းမပေါ်မှာ တက်လျှောက်နေတဲ့ လူတွေကိုကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်က လူတွေ တော်တော်
စည်းကမ်းပျက် အကျင့်ပျက်ဖြစ်နေပြီဗျာလို့ ပြောရင်း ဟွန်းမတီးရ ဇုံထဲမှာ ကြောက်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင်
ပျက်တာကတော့ အကုန်လုံး ပျက်နေတာပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
ထောက်ခံတာတော့ မဟုတ်ဘူး …..
ဒါပေမယ့် အားပေးတာဗျ ….( * _ ^)
မသင့်တော်ရင် မသင့်တော်ဘူးမှတ် ဒီမှာတင်ဖြတ် အဲ့ဒါမှနိဗ္ပာန်ရောက်မှာ
ကိုချာတူးလန်က တရားတွေ သိမြင်သွားပြီထင်တယ်
သာဓု သာဓု …
လှည်းတမ်းကို ဒီနေ့ပဲ ငါးကင်နဲ့ မာလာဟင်း သွားဝယ်တာ.. ဈေးသည်တွေ အကုန် လမ်းမ မှာ တက်ခင်းနေကြတယ် လူသွားတဲ့ လမ်းပလက်ဖောင်းကလည်း တံတောင်လောက်ပဲရှိတယ် အရင်ကတော့ ကြီးတယ် နောက်တော့ ကားပါကင် ထိုးလို့ရအောင် ပလက်ဖောင်းတွေ ခုတ်ထားတာ.. ခုတ်ထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းနေရာမှာ စားပွဲတွေ ခင်းထားတယ် ဈေးသည်တွေက ဈေးဗန်းတွေ လမ်းမ မှာ ချပြီးတော့ မီးဖိုနဲ့ ငါးတွေကင်တယ် မွန်ထူနေတာပဲ.. ကား ကပ်ရပ်ရင်တောင် ကားကို မီးစ စင်မှာတောင် ကြောက်ရတယ်။ လမ်း ကျပ်ကျပ်လေးမှာ ကားရပ်လု မတက် ၂စီးကို တစီးနဲ့ တစီး မထိအောင် တိုးကျိတ်ပြီး သွားရတယ် မာလာဟင်းဝယ်ဖို့ ကားကို ဘေးကပ်ရပ်လိုက်တော့ လူတွေက ကားဘေးက ပတ်သွားတယ် လမ်းမ ဘက်နေ.. မီးခိုးတွေ မွန်တာကို ရှောင်ချင်လို့.. သွားတဲ့ လူက လမ်းမ မှာ တက်လျောက် ကားတွေကလည်း ကျပ်တော့ မလူးသာ မလွန့်သာ တစီးနဲ့ တစီး မထိယုံတမယ် သွားနေကြတာ.. မလွယ်ပါဘူး ကွယ်… လမ်းချဲ့ မလား.. ဈေးဆိုင် သမားတွေ အတွက် သီးသန့် နေရာ တခု လုပ်ပေးမလား.. ဈေးသည် မရှိလို့လည်း မဖြစ်ဘူး.. ဈေးရောင်းသူက လက်လုပ်လက်စား ဆိုတော့ ငတ်အောင် လုပ်လို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ အားလုံး စည်းကမ်း နဲ့ ထိန်းမှ ရမယ် ထင်တယ်
ကျနော်တိုးလိုးတန်းလန်းချန်တာမဟုတ်ပါဘူး … ဆက်တွေးပြီးရေးစေချင်ကြလို့ပါဗျ။
ရန်ကုန်ကို ကားလမ်းတွေ ၂ထပ်ဖေါက်..လမ်းချဲ့.. လမ်းဖောက်လုပ်မဲ့အစား.. ရှိပြီးသားမြို့ ပတ်ရထားလမ်းကို လျှပ်စစ်ရထားသွားလို့ရအောင် လုပ်သင့်တယ်…။
အမှတ်မမှားရင်.. ရန်ကုန်မြို့ ပါတ်လမ်းအ၀ိုင်းဟာ.. တိုကျိုမြို့ ပါတ်..ယာမနိုတယ် အ၀ိုင်းပါတ်နဲ့ သိပ်မကွာဘူး..။
ယာမနိုတယ်ရထားတွေဟာ..တရက်တရက်… လူသန်းပေါင်းများစွာ(3.5 million)ကို .. ရွေ့ ပြောင်းပေးနေနိုင်တယ်..။
အဲဒါကိုအာရုံစိုက်လုပ်ရင်… ရန်ကုန်ရဲ့… စီးပွားရေးနဲ့..လူနေမှုအဆင့်အတန်း… ဆယ်စုနှစ်၁ခုအတွင်း၂ဆအနည်းဆုံးခုန်တက်သွားလိမ့်မယ်…။
မြန်မာ့ မီးရထား တခါစီး ၁၀ ကို အားကိုးနေရတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါကွယ်။
မြို့ပတ်ရထား အဆင့်မြှင့်တင်မယ် ဆိုရင် စရိတ်တွေ ကြိးမယ်ဆို.. ၁၀၀ ၂၀၀ မတတ်နိုင်လို့ ၁၀တန် ရထားစီးတဲ့ လူတန်းစား အတွက် တခုခု အရင်စီစဉ်ပေးမှ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်ဖို့ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲရှိလို့ မြို့ပတ်ရထားအတွက် ဓာတ်ခဲအကြီးကြီး ဒါမှမဟုတ် နြူကလိယားစွမ်းအင်သုံး ရထားစက်ခေါင်းထွင်ဖို့ ရုရှားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ မြန်မာစစ်ဗိုလ် အင်ဂျင်နီယာ သိပ္ပံပညာရှင်များကို အကြံပေးပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကရထားလမ်းတွေကိုအဓိကထားပြီးအားကိုးလို့ သိပ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်၊ ဒီမှာကပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုရှိတော့ ရထားလမ်းဆိုတာဗုံးထောင်လို့လွယ်တယ်၊ ကားလမ်းကျတော့ တလမ်းဗုံးပေါက်ရင်နောက်တလမ်းကရှောက်မောင်လို့ရတယ်။
ကားလမ်းတွေချဲ့ဖို့ ကားတစီးသွင်းတိုင်း လမ်း၁မိုင်ဖောက်လို့ရအောင် အခွန်ကောက်ပေါ့။
ကားလမ်းတွေချဲ့ဖို့ အခွန်ကောက် မကောက်တော့မသိဘူး၊ ကားတစ်စီင်္းရဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာပေါက်ဈေးထက်ပိုတဲ့ နှူန်းထားနဲ့တော့ အခွန်ဆောင်နေကြရတာပဲလေ.. လမ်းတွေတော့ ကျယ်မလာဘဲ ဘယ်နေရာမှာများ သွားကျယ်နေပါလိမ့် ???
ရန်ကုန်မြို့က လမ်းတွေ၊ တိုက်ခန်းတွေကို မြင်ရတာ အလွန်မွန်းကျပ်တယ် …
ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ရတာလဲ အသက်ရှူကျပ်လာတယ် …
ရန်ကုန်မှာနေရတာက ကျတော်တို့အညာလောက် ပျော်ဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး နောက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်မရလောက်ဘူး
ရန်ကုန်မှာ တိုက်သာ ဆောက်နေတာ ကားပါကင် သီးသန့် မရှိဘူး ၆ထပ်တိုက် ဆောက်ရင် အခန်း ၁၂ခန်း လူတန်းစိ ကားမပိုင်တော့ ပြသနာ မရှိသေးဘူး ကားပါရင်က ၃စီးထက်ပိုရပ်လို့ မရဘူး တချို့ တိုက်များဆို ၁စီးပဲ ရပ်လို့ရတယ်။ အခုတောင် တချို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ပြသနာတော်တော် ရင်ဆိုင်နေရပြီ။
မွေးလူနာပါလာလျှင် လှည်းတန်းဂျမ်းရှင်းမှာ ကားပိတ်တာနဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေး ဆေးရုံမရောက်ပဲ အဲ့ဒီမှာ မွေးလိမ့်မယ်… ။
အနာပေါက်နေလျှင် လှည်းတန်းဘက်ခြေဦးမလှည့်နဲ့ အကင်နံ့ ၊ အကြော်နံ့တွေနဲ့ နောက်နေ့ ယောင်ကိုင်းလာပြီး အနာ နှစ်ဆ ဖြစ်လိမ့်မယ် … ။
နောက်တခု ဘ၀င်မကျတာ ရှိသေးတယ်… အမှိုက်ပုံ… ။
တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်….. လူခြေတိတ်ချိန် မရှင်းပဲ … ပစ်ထားတယ်… တရက်လည်း မဟုတ် ၊ နှစ်ရက်လည်း မဟုတ်ဘူး … ။ သူတို့ အဘ လမ်းကြောင်းရှိတော့မှ နံနက်ဝေလီဝေလင်း ထ ကြုံးတယ်… လူတွေ စောစောစီးစီး ရုံးသွား ရုံးတက် ဈေးသွား ၊ ဆွမ်းခံထွက် တဲ့ အချိန် အပုပ်နံ့က မခံမရပ်နိုင်အောင်ပါပဲ… ။ ဒါတွေလည်း ပြင်ဖို့ကောင်းနေပြီ … ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ဒါမျိုးမရှိလို့ မျက်စိစုံမှိတ်မနေသင့်ဘူးလေ … ။
လှည်းတန်းကို ဘာလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ မြို့ပတ်ကို ဘာလုပ်မယ်။ အမှိုက်ကိစ္စကို ဘယ်လိုဆိုတာ။
ရွာသူ၊ ရွာသားတွေတောင်မှ ဒါတွေကို ပြင်ရကောင်းမှန်းသိတယ်… အပေါ်ကလူတွေကတော့ ဒါတွေ စဉ်းစားတောင်း စဉ်းစားမိရဲ့လား မသိဘူး.
တကယ်မသိတာလား သိပါလျက်ကယ်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တလား
တကယ်ကိုမကြားတာလား ကြားပါလျက်ကယ်နဲ့ မကြားသလိုနေတာလား
ပြုပြင်ရကောင်းမှန်းမသိတာလား အပြုပြင်ခံရမယ်သူကလဲ မပြင်ဘဲနေတာလား
အခြေခံကျကျကတော့… ပိုက်ဆံ(ဘက်ဂျက်) မရှိလို့… ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာလို့… ထင်မိပါတယ်..။
အစိုးရဆိုတာမျိုးကြီးက… ငွေသုံးတတ်ယုံနဲ့တင်မဟုတ်.. ငွေကိုဘယ်လိုရှာရမလည်းပါ သိတတ်ရသေးတာကိုး..။
ပိုက်ဆံက ဘယ်ရှိပါ့မလဲ … ။ … ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲဆိုတာ ကလေးတောင် သိတယ်… ။
ငွေမရှာတတ်ဘူးလို့လည်း မထင်ပါနဲ့။ ရထားတဲ့ငွေကို ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး။
တခါက ဦးစီးဌာနတခုရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အရာရှိကြီးတွေကိုခေါ်ပြီး ဝန်ကြီးအမိန့်နဲ့ ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ချပေးမဲ့ရံပုံငွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားကြဖို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆိုသူကပြောတယ်။ အရပ်သားအရာရှိကြီးတဦးက နဂိုကထဲကမှ စီးပွားရေးမလုပ်တတ် (ငွေမရှာတတ်လို့) ကျနော်တို့ လခစားဝန်ထမ်းလုပ်ပါတယ် ညွှန်ချုပ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်လို့ ဆက်မဆွေးနွေးခိုင်းတော့ဘူးလို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဒါဆိုရင်တော့ အလုပ်သေးသေး မလုပ်တတ်ဘူးထင်တယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ၊ ဂတ်စ်တွေ၊ ကားပါမစ်တွေ၊ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်တွေတော့ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
စီးပွားရေးလဲမလုပ်တတ်ဘူး။။ ကြီးပွားရေးလဲမလုပ်တတ်ဘူး။။ တိုးတက်တယ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိဘူး။။။ ပညာတတ်တွေက ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်မလုပ်ဘူး။။။ ဒီနိုင်ငံက၀န်ထမ်းတွေက စောစောကကွန်မန့်ထဲကလို ဘာမှမလုပ်ချင်လို့ လခစားဝန်ထမ်းလုပ်နေတာ ဆိုတော့ ကာ။။။ အပေါ်ကလူကြီးတွေက တရားသဘောပြည့်ဝလို့ပဲလား မသိလို့ပဲလား မတတ်လို့ပဲလား မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား။။။ ခက်တာက လှည်းတန်းကားကျပ်တာလဲ သူတို့လာရင်ချောင်နေတာပဲ ၊ အမှိုက်ပုံကလဲ သူတို့လာရင်မှမရှိတာ၊ ငါးကင်ညှော်တာကလဲ သူ့တို့ အိမ်လာညှော်တာမှမဟုတ်ဘဲ။။ ဒီတော့လဲ ဘာသိဘာသာ မသိမသာ သိသိသာသာ—– ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲကောင်းအောင်နေကြပြီး ပြည်သူတွေကို မေ့ထားတော့လေတော့သတည်းးးးး။။။။။။
အဲလိုဆိုရင် လိမ်မာတဲ့ ငယ်သားတွေကြောင့် တကယ် မကောင်းတာ သိချင်မှတောင် သိပါ့မလား..
လေးစားအပ်ပါရသော သူကြီးမင်းနှင့် ရွာသူ/သားများခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဆိုရင်ဖြင့်
တစ်ချို့လူကြီးတွေက သဘောကောင်းကြပါတယ် စိတ်ထားလည်းပြည့်ဝကြပါတယ်
ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့အနားမှာ ရှိတဲ့လူတွေက အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မသိနိုင်အောင်
ဖာထေးပြီး ဖုံးကွယ်ထားတော့လည်း (အမှန်တွေသိရင် အဆူခံရမည်စိုး၊ ရာထူးမမြဲမည်ကြောက်ကြသောကြောင့်) အကုန်လုံးကို အမှန်မသိနိုင်ကြတာ များပါတယ်
ဒါကြောင့် အမှန်တွေကို သိမြင်နိုင်အောင် မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးပါကြောင်း
ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ် …
လေးဖက်ရယ် ရန်ကုန်မြို့က ပျက်စီးနေတာကြာပီလေ ခုမှ တိတယ်လား အံရော အံရော… ဒူဆို မိုးမရွာလိုက်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်တောင် ရေကြီးပြီး ကားလမ်းတွေပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ချိန်ဆို နာရီဝက်နဲ့ရောက်မယ့်ခရီး ၂ နာရီလောက်လမ်းမှာကြာတယ်။
တကယ်တော့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအောက်ခြေသတင်းတွေကို အမှန်အတိုင်းသိရှိနိုင်ဘို့မလွယ်ပါ။ စစ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ စီးပွါးရေးအမြင်မှာ အားနည်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ပွဲထဲမှာကလို အမတ်က မတဲ့တဲ့သူကိုရှင်ဘုရင်ဆီသွားပြီး ဂုံးလျှောနေတာကိုကြည့်ပြီး ဘုရင်ကို အ လိုက်တာလို့မှတ်ချက်ချမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုပြန်စဉ်းစားမိတော့ ဇာတ်ကြည့်တဲ့သူကအစအဆုံး အကုန်သိပြီးမှ မှတ်ချက်ချရတာ၊ ဇာတ်ထဲကရှင်ဘုရင်က အမတ်လျှောက်တာတခုတည်းနဲ့ မှတ်ချက်ချရတာကွာပါတယ်။